Ukudla kwesilwane okwenziwe ngoju lwezinto eziphilayo - Ukudla kwezilwane Uju lwezinyosi Varallo Vercelli
Ukudla kwezilwane okususelwa kuzinyosi - Uju Lokudla Kwesilwane
Umsoco wemvelo ngenhlalakahle yezilwane zakho.
4.6 /5 amavoti (amavoti angama-18)
Ukudla Kwesilwane Kwezinyosi kungukudla okunempilo nokwendalo okwenzelwe ukuqinisekisa ukukhula okunempilo kokwakho abangane bezilwane. Ngokuqaphelekayo izakhiwo zokuzivikela e ama-antioxidants, inciphisa ukuvela kwezifo, ngenxa yenhlanganisela enempilo ye- izakhamzimba njengoba uju, lo I-propolis futhi i Ijeli laseRoyal. Ukudla Kwesilwane Kwezinyosi, ngokuhlukahluka kwalo kwezilwane ezifuywayo nezinja, kukhiqizwa eVarallo, eVercelli.
Ukudla Kwesilwane Esikuju: Ukudla okunempilo futhi okunamandla kwezilwane ezifuywayo
Una ukudla okunempilo lokho kuqinisekisa okwakho izilwane ezifuywayo i izakhamzimba enempilo futhi esebenziseka kangcono ekukhuleni kwabo: Ukudla Kwesilwane Kwezinyosi nguukudla ezalwe ngokuhlanganiswa kwezinto zemvelo ezifana ne- uju, Ijeli laseRoyal e I-propolis. Ngibonga lezi izakhamzimba, Ukudla Kwesilwane Kwezinyosi nguukudla ngayinye nginga e isango esebenza njenge elwa namagciwane emvelo nokuziqhayisa okukhulu izakhiwo zokuzivikela, ama-antibiotic e ama-antioxidants.
Ukudla Kwesilwane Kwezinyosi kungokwokuqala Ukudla kwemvelo okungu-100% ngokususelwa kuzinyosi ezisatshalaliswa futhi zenziwa e-Italy ze cani e UGatti. Inkampani ka-Honey yazalelwa ePiedmont ngenhloso yokwakha ukudla okunempilo okunomsuka ophephile osebenzisa konke izakhiwo zoju nezinye izinto zemvelo ezifana Ijeli laseRoyalit impova, okukhishwe kumvubelo, i-spirulina, ama-chestnut, la ukukhipha izinkomo nabanye abaningi. Uju lwase-Italy, Impova, Ijeli laseRoyal, I-Propolis, I-Vitamin C e Vitamin E izithako eziyinhloko zeben amafomula amabili akhethekile yakhelwe ukondla kahle izinja zakho namakati.
Ukudla okuNika amandla, okulwa ne-Antioxidant kanye ne-Antibacterial ngezinzuzo ezimangazayo zamathumbu nesisu
Uju lukaPet Kunconywa kuizinja zokudla namakati kusukela ezinyangeni zokuqala zokuphila. Her izakhiwo zokuzivikela zithanda ukukhula okuhle futhi zikhawulela ukukhula kwezinhlobo ezithathelwanayo. I- uju, kanye ne Ijeli laseRoyal futhi kuya ku I-propolis, usebenza njenge elwa namagciwane emvelo. Isenzo esizuzisayo emathunjini kunalokho sibangelwa ama-nucleotide ne-inulin, ekhuthaza ukuthuthukiswa okulungile kwezimila ezifakiwe.
Uju lwezilwane ezifuywayo kuyinto ukudla okunika amandla, kanye nokuba ngu- isibulala-magciwane futhi a i-antioxidant yemvelo. Ngenxa yefomula yayo kanye nokunotha kwe- vitamin, Isekela ukukhula okunempilo okuzungeze kwakho abangane abangama-furry.
Ikheli: Nge-Mario Tancredi Rossi, 273
Idolobha: UValallo Sesia
I-POSTAL CODE: 13019
Ifasitela lesitolo: www.honeypetfood.trovaweb.net
Inombolo ye-VAT: 02480090022